Taura nesu | WoopShop
Kana iwe uchida chero ruzivo nezve pre-kutengeswa kana mushure mekutengesa masevhisi akadai ako maamanje kuraira, nzira yekutenga, nzira dzekubhadhara, sarudzo dzekupomhodza kana kuitirana nharo, ndapota taura neWoopshop.com nekutaura chaiko kana E-mail. support@woopshop.com uye yedu Mutengi Service ino pindura kazhinji mukati me24 maawa.
WoopShop.com ndeye yepasi rose yekutengesa uye webhusaiti webhusaiti. Zvese zvigadzirwa paWoopShop zviri zvemhando yepamusoro uye zvinogona kutengeswa nemutengo wekutengesa. Kutenga zvigadzirwa zvepamhepo zvepamhepo kubva kumusika weChina wekutengesa hazvina kumbobvira zvave nyore. Kubatsira vatengesi vepamhepo nevatengesi vezvakawanda kuwedzera kutengesa uye kukura mabhizinesi avo, tinobatanidza vatengi vedu nevatengesi vepamusoro. Zvakare zvakare uye zvisina njodzi kune iwe kuti utange rako rako bhizinesi nerubatsiro rweWoopShop yekutengesa uye kudonhedza kutumira basa. Matura edu muEurope, iyo US & Canada, Australia, uye China ndezvauinazvo.
Nezvekutengesa uye kudonhedza kutumira basa, ndapota nyorera info@woopshop.com